Chile Oo Guul Dahabi Ah Ka Gaadhay Cameroon Xili Arturo Vidal & Eduardo Vargas Ay Shabaqa Soo Taabteen. - Laacib.net
Chile Oo Guul Dahabi Ah Ka Gaadhay Cameroon Xili Arturo Vidal & Eduardo Vargas Ay Shabaqa Soo Taabteen.
Xulka qaranka Chile ayaa guul dahabi ah ku furtay FIFA Confederations Cupka kadib markii ay tobankii daqiiqo ee ugu danbeeyay ay laba gool oo deg deg ah dhulka ku jiideen Cameroon oo guuldaro xun ku furatay tartankan. Arturo Vidal iyo Eduardo Vargas ayaa guushan u horseeday Chile iyada oo Alexis Sanchez uu kaydka ka soo baxay si uu Vidal ugu abuuro goolka furitaanka.
Xulalka qaramada Chile iyo Cemeroon ayaa kulan adag iskaga hor yimid FIFA Confederations Cupka wuxuuna ahaa kulankii ugu horeeyay Group B oo ay kula jiraan Germany iyo Australia oo iyaguna wada ciyaari doona. Chile iyo Cameroon ayaa u dagaalamayay in ay saddexda dhibcood ee kulankan helaan.
Kulankan ayaa ahaa kulan aad u adag isla markaana ay labada xul qaran si adag ugu dagaalameen balse waxaa saamayn wayn ku yeeshay qalabka ay FIFA tijaabinayso ee muqaal caawiyaha garsooraha ee VAR loo yaqaan kaas oo qaybtii hore e kulankan Cameroon iyo Chile min hal gool looga diiday.
Cameroon ayaa u muuqatay in ay hogaanka ciyaarta la wareegtay kadib markii uu shabaqa soo taabtay Ngadeu-Ngadjui laakiin waxaa loo sheegay in aanu goolkani sharci ahayn oo ay uu ahaa mid offside ah laakiin xaaladii ugu waynayd ayaa dhacday markii uu Vargas dhamaadkii qaybtii hore u muuqday in uu goolka furitaanka u dhaliyay Chile balse markan iyada oo Chile dhamaysatay dabaal degooda ayaa goolkan la diiday.
Muuqaal caawiyaha garsooraha ee VAR ayaa muujiyay in goolka Vargas uu ahaa mid aan sharci ahayn waxaana meesha laga saaray goolka Chile loo qoray ee ay u dabaal degeen waxaana qaybtii hore ee ciyaarta lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ay wali ciyaartu tahay mid laysku mari waayay ayuu tababaraha xulka qaranka Chile kaydka uga yeedhay hubkiisa ugu culus ee uu reebtay wuxuuna soo kiciyay Alexis Sanchez isaga oo daqiiqadii 58 aad ciyaarta ka saaray Edson Cortés.
DAQIIQADII 81 AAD Xulka qaranka Chile ayaa jabiyay ismari waagii ciyaarta ee waqtiga dheer soo taagnaa waxaana gool madax ah Chile u dhaliyay Arturo Vidal kaas oo aan markan wax diidmo ah ka maqal qalabka VAR isaga oo goolkan ku dhaliyay kubbad uu caawinteeda sameeyay Alexis Sanchez oo saamyn fiirankiisa ku sameeyay.
Cameroon oo kulankan si adag u dagaalantay ayaa dhamaadkii ciyaarta qaladaad xun samaysay taas oo Chile ka caawisay in ay gacanta sarre yeeshaan waxayna Cameroon awoodi wayday in ay falcelin deg deg ah ka samayso goolka looga naxsaday xili danbe oo ciyaarta ah.
DAQIIQADII90+1 xulka qaranka Chile ayaa ciyaarta hurdada u diray isla markaana guuldaro xanuun badan u xaqiijiyay Cameroon kadib markii uu Eduardo Jesús Vargas dhaliyay goolka labaad ee Chile waxaana goolkan la ansixiyay markii uu garsooraha kowaad la tashaday saraakiisha gacanta ku haysay qalabka VAR waxayna ciyaartu noqotay 2:0 ay ugu danbayn Chile jilbaha dhulka ugu dhigtay Cameroon.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2:0 ay Chile ku dubatay xulka qaranka qaarada Afrika ka socday ee Cameroon oo guuldaro ku furtay FIFA Confederations Cupka waxayna Chile sii heshay saddex dhicbood oo muhiim ah ka hor kulanka Germany iyo Australia.